Okwu mmeghe - Changzhou Suxing Century n'uwe Co., Ltd.
Qualitydị Ogo Ọdịdị ：
Uwe ahụ bụ ihe kachasị mkpa maka uwe gị. O nweghi ihe o mere na ndi okacha amara n ’ụwa a haziri uwe gị mma ma ọ bụ na etinyere ọnụ gị zuru oke. Ọ bụrụ na emere ngwaahịa gị site na uwe na-adịghị mma, ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ndị ahịa gị ga-aga n'ihu na akara ngosi ejiji na-abịa maka mkpa ha. Yabụ njikwa njikwa akwa dị mkpa kachasị mkpa na imepụta nnukwu.
Fabric obosara na mpịakọta ogologo atule, visual ego, akụkụ, aka akwa, na agba nnyocha a rụrụ n'okpuru ìhè dị ka ndị ahịa na-arịọ, ákwà extensibility ule n'ịrụ nkọwa, ákwà nkịtị na chemical ule, dị ákwà nyocha ọkọlọtọ ịchịkwa ákwà mma.
Anyị kpara uwe factory ọnwụ ngalaba na-ejikwara site ọkà na ahụmahụ ọkachamara. Ọrụ dị mkpụmkpụ na nke ziri ezi bụ ntọala nke uwe eji eme ọfụma.
Suxing Garments bụ ọkachamara na-emepụta uwe ejiji (ezigbo jaket ala / faux ala / padding jaket). A na-agbaso usoro ọ bụla nke usoro ahụ site n'aka ndị nwere ahụmịhe maara ihe ndị chọrọ nke ụdị mba na ndị na-ere ahịa. Njikwa nha na ngwaahịa ọ bụla dị oke mkpa, yana ijikwa ntụpọ akwa. Maka onye na-azụ ahịa ọ dịkwa mkpa ịnwe uwe nwere ike ịsacha na-enweghị ịtụle nbudata ọ bụla.
Tupu igbutu, a na-anwale akwa maka ịda mbà na ntụpọ akwa. Mgbe ị gbusịrị, a na-enyocha ogwe ndị na-egbu egbu ọzọ maka nkwarụ tupu ha ebutefee ụlọ ọrụ ịkwa akwa.
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ dịka iwu nchekwa mba ụwa si dị ma na-eyi uwe aka nchebe. Akụrụngwa na-enyocha ma na-ege ntị maka nchekwa na arụmọrụ.
Dị ka anyị maara maka ụlọ ọrụ nhazi akwa, usoro ịcha akwa bụ njikọ dị mkpa na imepụta uwe. N'agbanyeghị otu akụrụngwa si dị mma, ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe nha ma mepụta ngwaahịa ndị mezuru ihe achọrọ. Yabụ, ogo ya agaghị emetụta ọnụọgụ oke nke uwe ahụ, mgbe ahụ ngwaahịa agaghị ezute ihe achọrọ, mekwara ka ngwaahịa dị mma yana ọnụ ahịa ya ozugbo. Nsogbu akwa nke uwe nke nsogbu nsogbu na-eme na ogbe. N'otu oge ahụ, ịcha usoro na-ekpebi oriri nke akwa, nke metụtara kpọmkwem ụgwọ nke ngwaahịa. Ya mere, ịcha usoro bụ njikọ dị mkpa na imepụta uwe, nke a ga-akwụrịrị ezigbo anya. Ya mere, iji melite ogo nke ngwaahịa na ụlọ ọrụ uwe, anyị na-amalite ịcha ma melite ogo nke ịkpụ apụ. Thezọ kachasị dị irè ma dị mfe anyị ji eji igwe akụrụngwa akpaka karịa ịkpụcha aka.
Nke mbụ, melite usoro nlekọta ọdịnala
1) Ojiji nke igwe akụrụngwa na-eme ka mbelata na mmepụta ihe kwụsie ike;
2) Ezi mmepụta data, nhazi usoro na iwu;
3) Belata ojiji ojiji nke ọrụ aka, ma doo anya ibu ọrụ nke ndị ọrụ;
4) tingcha mma bụ ike iji belata ọnụahịa nke njikwa njikwa.
Nke abuo, meziwanye onodu maka mmeputa omenala
1) Iji igwe mkpochapu akpaka na-eme ka ahihia nke ulo oru akwa nwere echiche nke iguzosi ike n'ezi ihe, na-eme ka ihe omuma nke gburugburu ebe obibi di na otutu ndi oru na ogbaaghara, na-eme ka ebe obibi a kpochapuru nke oma ma me ka ihe oyiyi ulo oru di nma;
2) A ga-ewepụsị iberibe akwa ahụ site na ịchapu site na ụlọ ahụ site na ọkpọkọ pụrụ iche iji mee ka gburugburu ebe obibi dị ọcha ma dị mma.
Nke ato, wulite ogo njikwa, ma melite ezighi ezi nke mmepụta ọdịnala
1) A na-ekenye akwa ahụ dịka mmụta sayensị na nke ziri ezi kwa oriri, nke nwere ike ọ bụghị naanị ịchịkwa mkpofu nke ihe mmadụ kpatara, kamakwa ime ka njikwa akwa ahụ dị mfe ma doo anya;
2) The ọnwụ nkenke nwere ike n'ụzọ dị irè na-achịkwa iji belata Buck-agafe na esemokwu n'etiti na-arụkọ ọrụ ngalaba na melite ọrụ arụmọrụ nke n'etiti management pesonel;
3) Iji zere mmetụta nke ihe ndị mmadụ na oge mmepụta, ndị ọrụ kwesịrị ịhapụ ọrụ, hapụ ma ọ bụ jụọ maka ezumike n'oge ọ bụla, na mmepụta nwere ike ịkwado ya site na ịcha akụrụngwa;
4) Ọnọdụ ọnwụ ọdịnala na-emetọ gburugburu ebe obibi site na ibe efe efe, nke dị mfe imerụ ibe efe efe na-ebute ngwaahịa na-adịghị mma.
Nke anọ, melite arụmọrụ ọdịnala ọdịnala
1) Iji igwe mkpochapu akụrụngwa: akụrụngwa nwere ike melite arụmọrụ ọrụ karịa ugboro anọ ma e jiri ya tụnyere akwụkwọ ntuziaka;
2) Ọganihu nke ịcha oke na arụmọrụ nwere ike mee ka usoro nrụpụta nke usoro megharịa ngwa ngwa ma mee ka ngwaahịa malite na mbu;
3) Belata ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, belata nchegbu nke ndị njikwa, ma tinyekwuo ume na mpaghara ndị ka mkpa;
4) N'ihi mmelite nke arụmọrụ ọrụ, a ga-enwe ike ịba ụba ego dịka ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ si dị;
5) Imekọ ihe ọnụ na ịhazi ahaziri nwere ike imeziwanye ngwaahịa nke ngwaahịa ma nweta nnwapụta nke iwepụta ndị ahịa, si otú a na-achọpụta isi iyi nke usoro.
Nke ise, iji meziwanye onodu nke ụlọ ọrụ uwe
1) Ojiji nke igwe ihe eji akpaka, dika ochichi nke uwa;
2) Imeputa na imezi emeputa bu nkwa nke ogo ma melite onyonyo imeputa ihe;
3) Ebe obibi dị ọcha na nke n'usoro nwere ike belata ọnụego ngwaahịa na-adịghị mma ma melite onyonyo nke gburugburu ebe obibi;
4) Nkwenye nke ogo ngwaahịa na nnyefe ụbọchị bụ nsogbu kachasị echegbu maka ndị ahịa ọ bụla na-eweta ya. Mmekọrịta kwụsiri ike ga-eweta abamuru abụọ na-enweghị atụ ma wulite ntụkwasị obi na-eweta ndị ahịa.
Akpaka quilting igwe na usoro nke pụrụ iche quilting nke ihe nakawa etu esi na iche iche kọmputa ịchịkwa kpachie na table ije ọrụ. Jiri nlezianya melite arụmọrụ, ịrụ ọrụ otu pịa, mgbe onye ọrụ pịa bọtịnụ mmalite, igwe ga-agba ọsọ na akpaghị aka, onye ọrụ nwere ike ịkwadebe panel ndị ọzọ. Ọzọkwa, ekele maka mgbakwunye nke sistemụ njirimara akpaka, ọtụtụ ogwe dị iche iche nwere otu agba agba nwere ike rụọ ọrụ n'otu oge. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-akwadebe akara ngosi elu na ala tupu nhazi nke usoro mmepụta ọzọ, nke mere na arụmọrụ ahụ ka mma, meziwanye ogo ngwaahịa, na n'ihi iji nhazi mmemme, nwere ike hụ na ngwaahịa niile na agịga anya iji nweta ụkpụrụ na-agbanwe agbanwe, ma nwee ike belata mmejuputa iwu ahụ pụrụ iche, dịka maka ịkwa akwa nkuku nkuku, ma ọ bụ maka akụkụ ụfọdụ nke ntanye abụọ, wdg, na-eme naanị site na mmemme, ọkachasị kemfe maka ọrụ teknụzụ pụrụ iche nke ngwaahịa a; Ọ nwere ọrụ dị iche iche na ngwa dị iche iche. Enwere ike iji ya na nhazi nke ogwe ahụ, ma ọ bụ na ịkwa akwa na mpempe akwụkwọ na-enweghị ogwe.
Ndị ọrụ nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ ndị maara nke ọma ụkpụrụ nke ụdị mba ụwa. Uwe dị iche iche nwere ihe dị iche iche achọrọ. Echiche dị ọcha na nke dị ọcha dị mkpa maka uwe niile anyị na-ebupụ.
Rụcha abụghị naanị ịkpụcha na ịkwakọ ihe. Ọ na-achọpụta na mpempe niile enweghị ntụpọ ma dị ọcha. Ezi ọrụ ndọtị na-ekpochapụ nsị ma zere akara igwe. A na-enyocha mpempe akwụkwọ ọ bụla maka nkwarụ. Loose eri na-eji nlezianya ebipu.
A na-enyocha mpempe akwụkwọ ọ bụla maka nha tupu ịkwakọba.
Mgbe mbukota ọzọ random nnyocha na-eme site na anyị mma akara ngalaba. Njikwa ogo ga-eme nyocha nyocha yana nyocha mmesho na nyocha ike. Mgbe nkwenye nke nyocha ikpeazụ na nkwenye nke mbupu nke ndị ahịa anyị si mba ofesi ga-ebu ngwongwo maka mbupu.
Dị ka onye na-emepụta ihe, anyị ghọtara na ọ nweghị akara ma ọ bụ onye na-ere ahịa na-enwe mmasị na ngwaahịa na ụlọ ahịa ha nwere eriri ma ọ bụ ntụpọ ironing. Echiche dị ọcha na-eweta uru maka akara na ngwaahịa. A na-ebubata ngwongwo anyị na nkwa dị mma na ịkwa akwa.
Nke mbu: Ezigbo na ngwa ngwa. Companylọ ọrụ anyị nakweere igwe na-ejuputa akụrụngwa iji mezue nri otu bọtịnụ ngwa ngwa, ntinye ntinye infrared, na-atụgharị akpaka, na-ejuputa akpaka na arụmọrụ ndị ọzọ, kama ịjuju. Ọ na - eme ka mpempe akwụkwọ ọ bụla juputara na ya rụọ ọrụ nke ọma.
Nke abụọ: Ọ dị mfe ịrụ ọrụ. N'ozuzu, ọ nwere ike isi ike ịrụ ọrụ igwe na-ejuputa velvet. N'ezie, ọ bụrụhaala na edobere akụkụ ndị dị ka gram gram na usoro ọrụ, ọ nweghị ihe a ga-agbanwe na ọrụ na-esote nke igwe na-ejuputa velvet. Ọ dịghị mkpa iji rụọ ọrụ dị arọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche, nke nwere ike belata oke njehie nke velvet ndochi.
Nke ato: chekwaa ụgwọ ọrụ na ume. Ọtụtụ mgbe, a na-achọ ka ndị ọrụ abụọ ma ọ bụ atọ rụọ ọrụ imeju ụlọ. Agbanyeghị, n'ime igwe juputara na akpaka, ọ bụ naanị otu onye ka achọrọ iji rụchaa ọrụ ndochi ahụ. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịchekwa oge dị ukwuu maka ndị ọrụ ma belata ike oriri nke ụlọ ọrụ na-enweghị ebugharị ugboro ugboro.
Ngalaba ndi oru aka:
Sample uwe dị ezigbo mkpa na readymade uwe azụmahịa. Ihe nlere bu nke onye obula ghota mmeputa, omume na arụmọrụ nke uwe ahia zuru ahia. Ihe nlere ahụ sitere n'aka ngalaba ndị ọrụ ntanetị (ime ụlọ) dị ka ntuziaka nke onye na-azụ ahịa. Ọ nwere ike hụ na onye na-azụ uwe yana onye ahịa maka ọnọdụ na ọkwa nke uwe enyere. A na-ejikwa ihe nlele iji nweta echiche ndị achọrọ site na ahịa banyere nkwalite azụmahịa nke usoro ahụ.
Ngalaba ndị ọkachamara bụ ngalaba kachasị mkpa na ụlọ ọrụ akwa akwa. Ọ bụ na ebe a na-ewepụta echiche imewe site na ịbịaru uwe mara mma. Ọ bụ na ụdị mmepụta ụlọ ebe achọrọ ego nke ihe atụ (2pcs ma ọ bụ 3pcs ma ọ bụ karịa) nwere ike ime dị ka nkwenye onye na-azụ ya siri kwuo.
Anyị nwere ndị ọrụ nwere ahụmịhe na ndị na-eme egwuregwu nke ọma na-arụ ọrụ na ngalaba ngalaba. Anyị technician ngalaba mejupụtara ejiji na-emepụta, ụkpụrụ eso, sample ụkpụrụ egbutusị, ákwà ọkachamara, sample machinists, dabara ọkachamara na ndị niile bụ ndị ọkachamara na ha kpọmkwem ebe.
Mgbe imesịrị ụdị uwe ahụ, a na-atọgbọ ya n'àkwà achọrọ akwa ma belata ọnụọgụ dị mkpa maka ụdị a. Mgbe nke ahụ gasị, a na-ezigara ndị na-arụ ụdị ọrụ ahụ akwa akwa akwa bụ ndị mezue ụdị ọrụ ịkwa akwa dị iche iche site na iji ụdị igwe ịkwa akwa dị iche iche. N'ikpeazụ, onye na-ahụ maka ịdị mma na-enyocha uwe ndị ahụ site na ịgbaso arịrịọ onye zụrụ ma nyefee ngalaba na-ere ahịa uwe.
Ngalaba ndị ọkachamara nwere ọrụ ya:
1.Can mee ezigbo ihe nlele site na isoro ntuziaka nke onye zụrụ ya.
2.Can ghọta ihe ndị chọrọ n'aka onye zụrụ ahịa.
3.Can mezuo ihe onye zụrụ ya chọrọ.
4.Can gwa ndị zụrụ ihe ziri ezi ma ọ bụ nkwenye na onye zụrụ ahịa na nnukwu mmepụta ga-adị mma.
5.Can gosi nnwale na akwa chọrọ.
6.Can ka izu oke na ụkpụrụ na welara.
7.Can mee ka izu okè na oriri.
8.Can ka izu oke na uwe na-efu.
Nwere ike jiri ọrụ nka na onye ọrụ nwere nkà mgbe ị na-akwa akwa
Uwe n'ichepụta isi ụlọ ọrụ dị na Changzhou obodo, Jiangsu Province, China. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-etinye mmepụta na azụmaahịa. N'ihi ọtụtụ ngwaahịa anyị na-enye, anyị eguzobewo ọfịs n'ime ụlọ ọrụ maka ịhazi na nkwukọrịta. Iji mee ka ọrụ doro anya maka ndị ahịa anyị, otu onye a họpụtara ahọpụta ga-agbaso usoro iwu niile nke ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ndị ahịa anyị bịara ileta ọfịs anyị, ha nwekwara ike igosipụta mmepụta na-aga n'ihu. Nkwurịta okwu na onye na-emepụta uwe na China na-ekwukarị na ọ bụ ihe ịma aka. Ọbụghị naanị na enwere asụsụ na ọdịbendị, enwere nsogbu nke ọdịbendị ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọfịs anyị nwere ndị ọrụ lekwasịrị anya na mbupụ. Nke ahụ pụtara na ọdịbendị ụlọ ọrụ na-eduzi bụ nke onye na-azụ ahịa na mba ofesi, ọ bụkwa asụsụ Bekee ka eji eme nkwurịta okwu. Ọ dịghị mkpa maka onye ntụgharị okwu ọ bụla ma ọ bụ onye ọrụ mpaghara ka ọ jiri ọsọ na-enye iwu. A zụrụ ndị ọrụ ịghọta ọ bụghị naanị ihe ị chọrọ, kamakwa uru gị. Anyị nwere mkpokọta 40staffs n'ọfịs anyị na-eso ndị ahịa dị iche iche. Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-enye gị ọrụ kacha mma, mma kacha mma, oge kachasị mma maka ngwaahịa gị.